Akora fototra: tafahoatra ny fitrandrahana, miharatsy ny kalitao | NewsMada
Akora fototra: tafahoatra ny fitrandrahana, miharatsy ny kalitao
Anisan’ny akora fototra fampiasa ny rafia, fanaovana harona, satroka, poketra …Hita amin’ny faritra maro any avaratry ny Nosy, andrefana, atsinanana, sy afovoan-tany io akora fototra io. Ahitana mitrandraka azy ny amin’ny faritanin’i Mahajanga (60 %), faritanin’i Toamasina (20 %), afovoan-tany (15 %). Mamokatra 3000 t / taona amin’ny ankapobeny ireo faritra ireo, tafahoatra ny fitrandrahana ary miharatsy ny kalitao ankehitriny.
Akora fototra fampiasa ihany koa ny taretra amina karazan-javatra maro, mitovitovy amin’ny rafia, eo koa ny « vetiver » ho an’ny karazana asa tanana maro. Misy amin’ireo rafia ireo ampifangaroana landy hanaovana akanjo sy lamba firakotra. « Bambou » indray, akora fampiasa matetika amin’ny fanaovan-trano, fitaovana fampiasa ao an-trano, fanamboarana zava-maneno. Haingo trano isan-karazany vita avy amin’ny akora fototra hodi-kazo, toy ny « papier Antemoro », efa hatrany amin’ny taonjato faha-13.
Anisan’ny akora fototra koa ny hazo ala, fanaovana sary sikotra sy haingo trano isan-karazany fiasan’ireo mpanao asa tanana any Matsiatra Ambony sy Amoron’i Mania, izay manana talenta manokana amin’izany. Ankoatra izay ny vato tsotra na vato sarobidy, ny volamena. Ampy ny akora fanaovana asa tanana eto Madagasikara, saingy ny hazo no atahorana ho ringana noho ny faharavan’ny tontolo iainana.